Dlisa Inunu (isiZulu) - Slunečnice.cz
Slunečnice.cz » Rodina » Vzdělávání pro rodinu » Dlisa Inunu (isiZulu) 2
Dlisa Inunu (isiZulu) 2
Udlisa Inunu ufundisa ingane yakho imithetho yokufunda. Qoqa amaqanda wenunu bese udlisa inunu izinhlamvu zamagama ukuze zikhule zibe ngabangane abasha!
YINI UDLISA INUNU?
Udlisa inunu usebenzisa indlela 'zokudlala ukuze ufunde' ezaziwayo ezidonsa izingane futhi zibasize ngokufunda. Izingane zijabulela ukuqoqa nokukhulisa inunu ngenkathi zifunda izisekelo zokubala.
KUYIMAHHALA UKWEHLISA, AKUNASIKHANGISO, AKUNA ‘KUTHENGA PHAKATHI KOHLELO!
Konke okuqukethwe kuyimahhala 100%, kudalwe ngama-literacy nonprofit ango Curious Learning, CET, no Apps Factory.
IZIMO ZOMDLALO EZISIZA ULWAZI LOKUFUNDA:
• Ama-puzzle amnandi
• Imidlalo yokulandela izinhlamvu zamagama ezisiza ukufunda nokubhala
• Imidlalo esiza inkumbulo yesilulumagama
• Amazinga anzima "anokukhuluma kuphela"
• Umbiko wentuthuko lwabazali
• Ivumela abasebenzisi abehlukene bengene ngakhoke bazi intuthuko yabo
• Inunu ongaziqoqa, ezikhulayo njalo ezijabulisayo
• Yakhelwe ukukhuthaza amakhono wenhlalo nezomzwelo
• Akuna ‘kuthenga phakathi kohlelo
• Azikho izikhangiso
• Alukho uxhumano lwe-inthanethi oludingekayo
KUDALELWE INGANE YAKHO NGABANTU ABANOBUCHWEPHESHE.
Lo mdlalo usekelwe yiminyaka yocwaningo kanye nesipiliyoni yolwazi lwe-literacy. Ihlanganisa amakhono we-literacy, i-Phonological Awareness, i-Letter Recognition, Imisindo, Silulumagama, i-Sight Word Reading, nokuQonda ukuze izingane zakhe isisekelo esiqinileyo sokufunda. Yakhwe ngomqondo wokunakekela umhlambi wenunu, ukukhuthaza uzwelo, impikelelo kanye nokuthuthukiswa kwenhlalo nozwelo lwengane.
Udlisa Inunu ikhokhelwe yi-Norwegian Ministry of Foreign Affairs yona iyingxenye ye-EduApp4Syria-competition. Uhlelo lokusebenza lokuqala lwesi-Arab lwadalwa ngokubambisana kwe-Apps Factory, CET – The Center for Educational Technology, ne-IRC – The International Rescue Committee.
Udlisa Inunu yaguqulwa yaba yisiNgisi ngu-Curious Learning, inon-profit ezimisele ukuphakamisa ukutholakala kwe-effective literacy content ebantwini bonke abaludingayo. Siliqembu labacwaningi, onjiniyela, kanye nabafundisi abazimisele ukunika izingane indawo zonke imfundo ye-literacy ngolimi lwabo lwendabuko kusekelwe ngumniningwane nobufakazi - njalo sisebenzela ukuletha uhlelo Udlisa Inunu ezilimi ezibalulekile ezidlula ikhulu emhlabeni wonke.
Ubumfihlo bakho bubalulekile kithi. Ukuze uthole imininingwane emayelana nobomgomo yethu yobumfihlo, bheka